2021 Dhalashada Saint Lucia
Ka-qaybgalka Barnaamijka Maalgelinta Maalgelinta ee Saint Lucia ayaa ah tan ugu cusub uguna wanaagsan ee lagu helo dhalashada iyo dukumintiyada rasmiga ah (baasaboorrada) Kareebiyaanka.
Dhinacyo badan, cajaa'ib leh, oo aan la ilaawi karin Saint Lucia waa dhul gaar ah, gebi ahaanba sharci ah.
looma baahna in laga tanaasulo dhalashada jirta;
hoy looma baahna;
canshuur la'aan canshuurta dakhliga adduunka;
looma baahna joogitaan shaqsiyeed marka la buuxinayo arjiga kaqeybgalka barnaamijka;
wax shuruud u ah wareysiga, shuruudaha waxbarashada ama khibrada maamulka;
waajib kuma aha in la dalbado fiiso lagu galo dhulka in ka badan 146 dal, oo ay ku jiraan aagga Schengen, Great Britain, Hong Kong;
helitaanka jinsiyadda muddo aan ka badnayn 3 bilood;
xuquuqda helitaanka dhalashada carruurta ka yar 25 sano;
ka mid noqoshada waalidiinta ka weyn da'da 65 ee la nool codsadaha;
diiwaangelinta muwaadinimada dadka naafada ah ee ay daryeelaan dadka (carruurta, waalidiinta);
dhul ku habboon deganaanshaha joogtada ah;
helitaanka dukumiinti rasmi ah (baasaboor) Saint Lucia, muddo aan ka badnayn 3 bilood.
Sida loo helo dhalashada Saint Lucia:
1. Iyada oo la maal-galiyo Sanduuqa Horumarinta Qaranka (muujinta - aan laga noqon karin):
$ 100 kun - codsadaha weyn;
$ 165 kun - oo loogu talagalay codsadaha weyn oo lagu daray xaaska;
$ 190 kun - oo loogu talagalay codsadaha weyn oo lagu daro xaaskiisa ama saygaaga oo lagu daray 2 carruur ah;
$ 25 kun - qofkasta oo xiga oo daryeelka kujira.
2. Iyagoo maalgashi ku sameynaya guryaha
Si loo helo dhalashada Saint Lucia, waxaa lagama maarmaan ah in la iibsado hanti ma guurto oo wadar ahaan qiimaheedu yahay ugu yaraan $ 300 kun, hantida la sheegay waa inay lahaataa ugu yaraan 5 sano. Kharashaadka diiwaangelinta hantida, diiwaangelinta iyo canshuuraha waxaa lagu bixiyaa wax ka badan qiimaha hantida.
3. Maalgelinta maalgelinta hay'adaha sharciga ee Saint Lucia
Codsadayaasha dhalashada waa inay ugu yaraan maalgashadaan US $ 3.5 milyan iibsashada, abaabulka ama kaqeybgalka hay'adaha sharciga ee Saint Lucia. Uguyaraan 3 muwaadin ee Saint Lucia waa inay kujiraan howlaha hay'ad sharci. Laba codsade, lacagtani waa UC $ 6 milyan. Ugu yaraan 6 muwaadiniinta Saint Lucia waa inay ku lug yeeshaan nashaadaadyada hay'ad sharciyeed.
Qeybaha mashaariicda la ansixiyay:
barta cuntada gaarka ah;
dekedda markab iyo marina;
warshad wax soo saarka beeraha;
dekedda, buundada, waddada iyo waddada weyn;
hay'ad, qaab-dhismeedka nooca cilmi-baarista sayniska;
4. Xiriirka dowladda
Shakhsiyaadka dalbanaya dhalashada waa inay maal gashadaan qaddarka:
500 kun US $ - codsadaha weyn;
535 kun US $ - oo loogu talagalay codsadaha weyn oo lagu daray xaaska ama sayga;
550 kun oo Mareykan ah - oo loogu talagalay codsadaha weyn oo lagu daray xaaska ama sayga iyo 2 carruur ah;
25 kun US $ - qof kasta oo dheeri ah oo daryeelka ku jira.
Kharashaadka laxiriira hubinta ku lug lahaanshaha falal dambiyeedka:
7 US $ - codsadaha ugu weyn,
US $ 5 - loogu talagalay dadka ku tiirsan da'da 000 sano.
- haddii ay dhacdo maalgashi
$ 2 kun - codsadaha weyn;
$ 1 kun - qof ku tiirsan oo dheeri ah.
- markaad iibsaneyso hanti ma guurto:
$ 50 kun - codsadaha weyn;
$ 35 kun - xaaska ama sayga, carruurta ugu yaraan 18 sano jir ah;
$ 25 kun - loogu talagalay carruurta da'doodu ka yar tahay 18 sano.
Muwaadinimada Saint Lucia ENG
Jinsiyadda Saint Lucia RUS